Fitsinjaram-pahefana :: Handeha miandalana ny fanendrena ireo governora • AoRaha
Fitsinjaram-pahefana Handeha miandalana ny fanendrena ireo governora
Tsy mbola ho ato ho ato ny fanendren’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, an’ireo governora miisa iraika ambin’ny folo ambiny. Voa­laza fa mbola miteraka olana amin’izany ny fanasarahana ny faritra Vatovavy Fitovinany.
Mila fifampidinihana maharitra izany raha ny fantatra ary hiankinan’ny famari­tana ny isan’ireo governora ho roa amby roapolo na ho telo amby roapolo. Antony izay tokony mety hisian’ny fanalavam-potoana amin’ny fametrahana amin’ ny toerany ireto governora fanampiny ireto.
Na izany aza nambaran’ ny Filoham-pirenena fa: “tsy maintsy voatendry hatramin’ny faran’ity taona 2019 ity ireto governora ireto”. Notsindriany ihany koa fa fanendrena vonjimaika ihany aloha no tanterahina ka tsy maintsy mbola hisy ny fifidianana an’ireo governora aorian’ny fifidianana ben’ny tanàna.
Fandaniana ny LFR 2020 Mitaky ny hitantana ny tetibolan’ izy ireo ny Antenimierandoholona
Fanovan-drafitra ny tafika malagasy Manamboninahitra an-jatony miatrika fifantenana
Ady amin’ny aretina SIDA, raboka ary tazomoka :: Nanamafy ny antso amin’ireo mpiara-miombon’antoka Rajoelina Andry
Fifidianana ben’ny tanana sy mpanolotsaina :: Handrakotra kaominina enina amby fitopolo sy fitonjato ny Safidy